Aok’ izay ny kilalao politika maloto - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Aok’ izay ny kilalao politika maloto sy ny fanaovana takalon’aina ny vahoaka
MAHARARY satria mihevitra ny maro fa efa tokony hivoaka amin’ilay aizina niainany nandritry ny krizy lavareny ny Firenena, taorian’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika sy ny Solombavam-bahoaka, fa tsy sanatria hiditra krizy vaovao indray ka hanampy trotraka ny fahavoazana efa nisy sy misy ankehitriny.
MAHAMENATRA satria Olondehibe sy Tompon’andraikitra ary nilokaloka teo imason’ny olompirenena fa hanarina sy hampandroso ny Firenena no nofidiana tamin’ny desambra 2014 fa tsy sanatria akory ny mifanohitra amin’izany.
Hagagana anefa ny fahitana azy ireo ankehitriny fa toa ady seza sy fitadiavana tombontsoa manokana no miseho lany etsy sy eroa ka mampiteny ny moana. Very fanahy mbola velona toy ny valala voatango ny rehetra eo am-pijerena ny adilahy politika eo amin’ireo olomboafidy vao nolanian’ny olompirenena. Hany ka toy ilay Rafotsibe very laona ny Malagasy ka miandry izay higadonany. Miandry izay hanendrena ny ho Praiminisitra sy miandry izay hitsanganan’ny Goverinemanta. Miandry izay hivoaran’ny fiainan’ny olompirenena tsirairay eo amin’ny andavanandro. Miandry izay hanjakan’ny fandriampahalemana mba tsy hisian’ny fitaintainana isan’ andro vaky. Raha fintinina dia miandry izay hiaingan’ny fanovana eto amin’ny Tany sy ny Fanjakana mba hahazoan’ny sarababem-bahoaka fiainana tsaratsara kokoa. Sanatria anie ny hilazana hoe GASY ka MIANDRY.
Koa manao antso avo aminareo Tompon’andraikitra isan-tsokajiny sy isan’ ambaratongany ny KMF/CNOE mba hamalona sy hampirina ny hambom-po politika ary indrindra ny fikatsahana na fiarovana ny tombontsoa manokana fa hametraka ambony ny tombontsoam-pirenena ary hitandrina fatratra ny fihavanana sy ny fifankatiavana ary ny firaisankina, izay soatoavina malagasy mampiavaka antsika.
Miantso anareo mpanao politika ihany koa mba tsy ho tia tena fa hijery ireo Malagasy roapolo tapitrisa. Fiaraha-mientana sy fiaraha-miasa amin-kitsim-po tsy misorona no tadiavin’ny olompirenena aminareo fa tsy hifanenjika sy hifanaratsy na hifanipaka toy ny valala an-karona. Porofoy fa tena tia tanindrazana tokoa ianareo.
Farany dia miantso an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika mba handray ny andraikitra tandrify azy, araka ny fampanantenana sy ny fianianana nataony, mba hialana amin’izao savorovoro politika izao. Ny Ntaolo razantsika dia hendry raha niteny fa ny hisavorovoroan-kilantoana ary tsy misy izay tsy miady fa izy to-fo no mpamosavy. Olonkendry ianao ka mahafantatra izay heverinao fa mahasoa ny Firenena. Mba ho tanteraka tokoa anie ilay fampihavanana tena izy sy ny fampandrosoana marina ity Nosintsika ity.
Raha ireo no tontosa dia hotanteraka ilay hoe : “HIADANA SY HO FINARITRA, E! SAMBATRA TOKOA IZAHAY”.